Friday, February 10, 2017 Sọnde, Febụwarị 12, 2017 Douglas Karr
Ezigbo Jack, Ruo otu afọ ugbu a, emeela m njakịrị na Twitter dị ka nwa agbọghọ m nwere anwụrụ n'ụlọ akwụkwọ nke na-agaghị enye m oge nke ụbọchị. Otu oge anyị na-egwuri egwu na-atụgharị karama ahụ n'okpuru ụlọ, ọ na-agbanye karama ahụ ka ọ susuo nwa okorobịa ahụ n'akụkụ m nke ahụ bụ jerk. O gbawara obi. O mechara mebie nke ya. Anyị abụọ tufuru. Twitter na-efu, kwa. I dere na ego i nwetara
A hụwo mgbe a na-akwado Celebrity Endorsement dị ka nhọrọ dị mma maka ụlọ ọrụ iji kwalite ngwaahịa ha. Ọtụtụ ụlọ ọrụ kwenyere na ngwaahịa ha metụtara onye ama ama ga-enyere aka ịre ahịa. Ndị ahịa na-ejighị n'aka na ha nwere mmetụta na 51% na-ekwupụta na nkwado ndị a ma ama emeghị obere ihe ọ bụla na mkpebi ịzụta ha. Ọ bụ ezie na ROI na ọtụtụ usoro ịzụ ahịa ahịa nwere ike ịba ụba - ROI na nkwenye ndị a ma ama nwere ike isiri anyị ike ịkọwapụta. Enwere ọtụtụ